Fametahana bibidia 12 avy amin'ireo olona goavambe | Famoronana an-tserasera
Iray amin'ireo teknika mampiady hevitra sy mahomby indrindra raha hisarika ny sain'ny besinimaro ny fampiasana irony sy fifanoherana. Rehefa sendra tsy fitoviana isika dia manandrana mahatakatra azy ho azy. Hodinihinay izany mandra-pahitanay ny valin'ny fanamby atolotra antsika. Izany no antony ny mashup dia loharano tena ilaina mba hisarihana ny saina. Araka ny hitantsika tamin'ny tranga iray hafa, na dia avy amin'ny tontolon'ny mozika aza io teny io, dia nanjary nampidirina tao amin'ny tontolon'ny sary ary nahazo toerana miaraka amin'ny tanjona tokana hamafazana resabe. Betsaka ny karazana mashup na mixes. Avy amin'ny fampifangaroana ny endri-tsoratra amin'ny sary tsy mifanaraka, ny fampidirana ireo hevitra mifanohitra amin'ny tontolo iainana na ny fifangaroana ara-bakiteny misy singa roa mifanohitra, toy ny orinasa ohatra. Ny valiny dia tolo-kevitra vaovao, feno fahasahiana ary mahomby izay mangalatra ny maso sy ny hevitr'izay rehetra mahita azy mora foana.
Avy amin'ny maso ivoho Recordus no nanaovan'izy ireo ireo endrika tsara sy mifanohitra ireo. Ao amin'izy ireo dia mifangaro ireo marika famantarana marika malaza ary fantatsika tsara daholo, mpifaninana izy ireo. Avy amin'ny Coca-Cola mahazatra vs. Pepsi, Apple vs. Windows, mankany amin'ny Macdonald's vs. Burger King. Vory ny rehetra ary ny marina dia manaitra sy liana amin'ny fahitana azy ireo mifangaro. Avy eo avelako miaraka amin'izy ireo ianao ary manasa anao hiala amin'ny hevitrao. Mihevitra ve ianao fa teknika mahomby io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fametahana bibidia 12 avy amin'ireo olona goavambe